Aasaasyada Caymiska Guriga / Minnesota.gov
Qaybtan waxaa loogu talo galay inay kaa caawiso inaad fahamto xeerarka caymiska guriga—waxay caadi ahaan aanay daboolin, waxa saameeya qiimayaashooda, iyo sida iyo hoosta duruufta la tirtiri karo ama aan la cusboonaysiin.
Gol daloolaha guud ee caymiska mulkiilayaasha guryaha
Xeerarka mulkiilyaasha guryaha way kala duwanyihiin shirkad oo mulkiilayaasha guryahaa si khaladan ayay u qaataan walxaha gaarka ah iyo sifooyinka lagu daboolo. Marka la iibsanayo daboolida caymiska, la hadal wakiilkaaga caymiska wax ku saabsan baahiyaha oo hubso inaad sheegto walxaha soo socda:
Bamka guryaha lagaga soo nuugo biyo qaybta hoose ee guriga
Xerooyinka iyo xayndaabyada aan ku dheganayn
Marada akrobaata lagus ameeyo iyo berkadaha
Fanka waxa la isku qurxiyo, alaab qaali ah oo hore ( Iyaddoo ku xidhan qiimaha, aad doonayso inaad ka fekerto ku darista xeerka alaabta gaarka ah ee dheeraadka ah .)
Xafiiska guriga ama ganacsiga ( waxaad u baahan doontaa xeer dheeraad ah oo aad ku ilaaliso hantidaada haddii macmiilka lagu dhaawacay dhismahaaga ama haddii badeecad waxyeelo gaadhay ama la xaday.)
Waxay u bixisaa si ay u noqoto mid hore wax looga sii qabto
Marka dib loo eegay doorashooyinkaaga xeerka, ka fikirida arrimaha soo socda waxay caawin kartaa inay kugu hagto adiga qadarka habboon ee daboolida ee baahiyahaaga.
Go’aan ka gaadhida daboolida habboon
.Abuurida liiska guriga waxay kaa caawin kartaa go’aan ka gaadhida haddii aad hayso mid ku filan Haddii aad haysato walxo gaar ah sida fanka, sida dahabka la xidhido, ka feker haddii aad u baahantahay daboolid dheeraad ah. Sidoo kale waxaad u baahantahay sababta daboolida ee xero ama berkad Walxahan uma bahan karaan in lagu daboolo hoosta xeerkaaga ama waxay sare ugu qaadi kartaa masuuiyadaada.
Sare u qaadista jarjridaada kharashaadka qadarka caymiska ee hooseeya
Waydii wakiilkaaga caymiska haddii ay jiraan dhimida lacagta aad u qalanto oo dib u eeg haddii aad sare u qaadi karto jarjaridaada si aad u yarayso kharashaadka qadarka caymiska.
Daadka iyo dhul gariirka inta badan ma daboolo heerka mulkiilayaasha guryaha ama xeerka kiraystayaasha. Go’aan ka gaadha halistaada noocyadan masiibooyinka ah oo waydii wax ku saabsan ikthiyaarada la heli karo. Booqo www.floodsmart.gov wixii faahfaahinta caymiska daadka ah.
Go’aan gaadhista masuuliyada daboolida
Daboolida $250,000 waxay u eekaan kartaa sidii oo ay jid dheer qaadi lahayd si loo ilaaliyo hantida, laakiin marka shaygaaga kootooyinka hawlgabka, kaydka, iyo qiimaha aad u baahan karto wax dhaafsiisan qadarkaas. Xeerka dalaayada waxa uu kordhin karaa masuuliyadaada daboolida ka saraysa qadarka aa kad heli karto xeerka aasaasiga ah ee mulkiilaha guriga
Dib ugu eeg daboolidaada si sanadle ah
Shirkadaha caymiska waxay beddeli karaan shuruudaha xeerka ee cusboonaysiinta, laakiin waa inay adiga ugu horayn kugu wargeliyaan. Akhri dhammaan ogaysiisyada iyo macluumaadka laga soo diray shirkada caymiska.
Diyaarso liiska guriga
Liiska guriga waxa uu cawin karaa haddii aad u baahato inaad soo gudbiso sheegashada caymiska ka dib alaabtaada marka la waxyeeleeyay ama ay luntay. Liisa saxda ah oo faahfaahsan keliya ma fududayn doono nidaamka sheegashada, waxay caawin kartaa hubinta in si habboon laguugu magdhabay. Tilmaamahan waxay kaa caawin karaan inaad isku darto liiska dhammayska tiran ee guriga:
Qor shay kasta si buuxda oo suuragal ah, ay ka mid tahay summada, lambarka taxanaha ah, iyo lambarka moodeelka. Qaadista sawirku way ku caawin kartaa.
Hay risiidhada si aad u caddayso waxa aad shay kasta ku bixisay.
Dib u eeg xeerkaaga caymiska si aad u ogaato waxa la daboolo iyo haddii lahaanshahaaga lagu caymiyay qiime kasta oo lacag caddaan dhab ah ama kharashka beddelka.
Wixii ah alaab dhif ah ama qiimo leh sida dahabka, alaabta hore ee qiimaha leh, ama fanka, waxaad dooni kartaa inaad ka fekerto ku darista caymis dheeraad ah -- ku daritaan-- xeerkaaga ah.
Cusboonaysii liiska sanadkii oo ku kaydi, sanduuqa dabka xejiya, ama ku kaydi onalyn ahaan.